News Collection: अमेरिकामै लुके टवाँकेन्द्र !
अमेरिकामै लुके टवाँकेन्द्र !
लोकप्रिय टेलिफिल्म 'तीतोसत्य'का ट्वाँकेन्द्र अर्थात गोपाल अधिकारी अब नेपाल फर्कनेछैनन् । सुटिङका लागि झन्डै एकमहिनाअघि अमेरिका पुगेका उनी अमेरिकामै लुकेका छन् । उनीसँगै अमेरिका पुगेका दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौला भने स्वदेश फर्किइसकेका छन् । 'तीतोसत्य'बाट सानो पर्दाको कमेडियनका रुपमा चर्चा बटुलेका ट्वाँकेन्द्र कलाकार भिसामा अमेरिका उडेका थिए ।
अमेरिकामै खिचिएको 'तीतो सत्य'को कन्सेप्ट भने यसअघि नै प्रसारण भैसकेको छ । जुन कन्सेप्टमा ट्वाँकेन्द्रसहित दीपकराज र दीपाश्रीले पनि अभिनय गरेका छन् । ट्वाँकेन्द्र अमेरिकामै लुकेको कुरा दीपकराजले गोप्य नै राखेका छन् । ट्वाँकेन्द्र 'तीतो सत्य'का निर्माण नियन्त्रक थिए ।
यसैगरि गायक यम बराल, गायिकाद्धय नलिना चित्रकार र सुनिता दुलाल पनि अमेरिकामा लुकेको हल्ला नेपाली सांगीतिक बजारमा गाईँगुईं चलेको छ । दुईमहिनाअघि कार्यक्रमको सिलसिलामा यी तीनैजना अमेरिका उडेका थिए । उनीहरु पनि स्वदेश फर्कने सम्भावना नरहेको विवरणमा जनाइएको छ । कलाकार अमेरिकामा लुकेको यो पहिलोपटक भने होइन । थुप्रै नेपाली कलाकार यतिबेला अमेरिकामा छन् । यस्ता कलाकार फर्किउन भन्ने हाम्रो शुभकामना छ ।